China mini DP kune VGA inoshandura vagadziri uye vatengesi |Wellink
Kupinza: Mini DP MALE
Zvakabuda:DVI MUKADZI 1080p
Chigadzirwa saizi: L45mm x W21.5mm x H 12mm
Cable kureba: 12cm
Cable zvinhu High-kuchena okisijeni-isina mhangura musimboti
Interface Nickel yakaiswa
Shell High-simba ABS
Inoshanda Batanidza iyo mini DP interface mudziyo kuVGA interface yekuratidzira mudziyo
Kutsigira kugadzirisa MINI DP vhidhiyo yekuisa fomati: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P/60HZ
Kutsigira sarudzo 2 VGA sarudzo yekubuda: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/60HZ
Warranty 1 gore
Packing box yakanakisa katoni kurongedza
Iyo MINI DP inoshandura ndeyepamusoro-tsanangudzo vhidhiyo inoshandura inoshandura MINIDP yekubuda mudziyo kuenda kuVGA interface, kureva kuti, inogona kushandura chiratidzo chemamwe maMINI DP zvishandiso semakomputa, MacBook Air, madhijitari makamera uye zvichingodaro kuita VGA chiratidzo. kubuda.Iyi inoshandura chigadzirwa goko Uchishandisa yakakwirira-simba ABS zvinhu, chitarisiko chiri nyore uye chine fashoni.
1. Tsigira imwe MINI DP interface yekupinda uye imwe VGA interface yakabuda;
2. Tsigira DVI1.2 shanduro, tsigira CEC, inowirirana neHDCP;
• Mini DisplayPort (Mini DP kana mDP)/Thunderbolt TM port (HASI Thunderbolt 3) kombiyuta inopindirana neHDTV, monitor, kana projector neVGA;Yakasiyana VGA tambo (inotengeswa zvakasiyana) inodiwa.
• Inopindirana neMacBook Air, MacBook Pro (KUSATI kwa2016), iMac (KUSATI kwa2017), Mac Mini, Mac Pro;Microsoft Surface Pro/ Pro 2/ Pro 3/ Pro 4, Surface 3 (HAISI Surface/ Surface 2), Surface Book, Lenovo ThinkPad nezvimwe.
• Inotumira vhidhiyo kubva pakombuta kana piritsi kuti itarise kuratidzwa;Inotsigira mavhidhiyo zvinogadziriswa anosvika 1920 x 1200 uye 1080p (Yakazara HD).
• Low-profile connector haivharidzi zviteshi zviri pedyo pakombuta yako, yakagadzira kusununguka kwehupenyu hurefu.
Midziyo yekupinda:Signal masosi ane mini DP yekubuda interface, senge makomputa, MacBook Air, madhijitari makamera uye zvimwe zvigadzirwa zveMINIDP.
Ratidza zvishandiso:Ratidza michina ine HDMI yekupinza interface, senge mamonitor, maTV, uye mapurojekita.
Mubvunzo:Inoshanda kune Surface 4 Pro?
Mhinduro:Zvinofanira.Ndine HP Specter x360 ine mini show port inomhanya Windows 10 uye inoshanda zvakanaka.
Mubvunzo:Inoshanda nelenovo yoga 920?
Mhinduro:Mhinduro pfupi ndeyokuti kwete.Iyi adapta ine yechirume Mini Display Port plug uye yechikadzi VGA port.Iko kuenda kubva kuMini Display Port kuenda kuVGA tambo (uye pamwe ichibva yapinda mucherechedzo VGA chiteshi).Iyo Yoga 920 specs yandakaona yakati I/O ports ine USB 3.0 Yagara Pakuchaja uye 2 USB-C 3.1/Thunderbolt (pamwe nemagetsi jack uye headphone/mic jack).Izvo (Thunderbolt Port Compatible) zvinotemerwa ndezvekuti iwe une Thunderbolt port seyakaratidzwa pawikipedia ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/ Thunderbolt_ Connertor.jpg/ 800px- Thunderbolt_ Connertor .jpg ).Kana pasina imwe yezviteshi zvako ichiita sezvizvi (izvo zvinofungidzira kuti havaite nekuti USB- C/ Thunderbolt) saka adapta iyi haishande kune yako YOGA 920.
Mubvunzo:Inoshanda neSurface dock here?
Mhinduro:Ndakaishandisa kubatanidza yekare VGA skrini uye inoita seinoshanda zvakanaka nedhoki.
Mubvunzo:Chigadzirwa ichi chinogadzirwa kupi?
Mhinduro:Bhokisi rinoti made in China.Ndinotenda kuti uchaomerwa kuti uwane chero chakafanana neyakagadzirwa chero kupi kumwe.Zvandakagamuchira zvinoshanda zvakakwana.
Mubvunzo:Izvi zvichashanda kune apuro mini (kwete ipad) iyo apple mini mudziyo?
Mhinduro:Ndofunga kudaro.Ndakatarisa kumusoro apple mini display port dhiyagiramu uye mini show port inotaridzika zvakafanana nechiteshi chekuratidzira paWindows PC.
Zvakapfuura: mini DP kune HDMI inoshandura
Zvinotevera: 30w inokurumidza kuchaja inotakurika Power Adapter yephone